Ragga iyo naagtu, mid walbaa wuxuu dhameystiraa midka kale "Ninka wuxuu ku raaxeysanayaa farxadda uu dareemayo, haweeneydu waxay ku raaxeysataa farxadda ay keento"
Markaad kaligaa tahay / keligaa tahay, dadku waxay weydiiyaan su'aalo kusaabsan midkaaga yar gabar / saaxiib.
Markaad mid leedahay, waxay ku weydiinayaan inaad hubto inaad sameysay xulasho sax ah.
Markaad hawl gasho, way ku weydiin doonaan goormay arooskaagu tahay
Markaad guursato waxay ku weydiinayaan maxaad weli caruur u yeelan weyday ??
Markaad mid haysatid, waxay ku weydiinayaan goorma ayuu wiilka yar ama walaasha yari imaan doonaa ??
Markaad furtaan, iWaxaan ku weydiinayaa sababta ??
Markaad mar labaad isqorto, waxay ku weydiinayaan sababta dhaqsaha badan ??
Dadku weligood ma joogsan doonaan fara gelinta noloshaada: aMarkaa haddaba ku faana cidda aad tahay iyo sida aad tahayba, oo ha u fiirsan waxa ay dadku adiga kuu maleeyaan, maxaa yeelay waa noloshaada, adiguna waa inaad go’aamisaa sida aad ugu noolaan karto iyadoo laga baqayo ilaahyada awowayaashayo .
Sep30 03: 44